Halis Weyn Ayaa Ku Sugan Inuu Ninku Ka Maqnaado Xaaskiisa Muddo Dheer – Fatwa Somali
/Fiqh /Halis Weyn Ayaa Ku Sugan Inuu Ninku Ka Maqnaado Xaaskiisa Muddo Dheer
Su’aal: Ciraaq ayaan ka shaqeeyaa ee haddii ay duruufta shaqadayda iyo dhaqaale ay keenayso inaan gurigayga ka maqnaado laba sano iyo badh, maxaad u malaynaysaan. Ma xaaraan baa inaan mudadaa oo dhan maqnaado, wax i tusa Ilaahay khayr ha idinka siiyee?
Jawaab: Mudadani way dheer tahay, waxa kugu haboon inaad waqtiyada dhexdooda u tagtid reerkaaga, dabeetana aad ku noqotid shaqadaada. Haddiise ay xaasku sidaasi ogoshahay halisna ku ahayn, ood ogtahay inay ogoshahay sidaasi, iyaduna tahay gabadh dhowrsoon oon halisi ka soo gaadhayn arinkaasi (maqnaashahaaga), wax dhibi kuma jirto insha Allaah.
Laakiin waxaan ku waaninayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba in aanad sidaasi samayn, waxana ku saaran inaad u tagto xaaskaaga waqtiyada dhexdooda oo aanad muddo dheer ka maqnaan, waayo mudada dheer waxa adiga iyo iyadaba ugu sugan halis weyn.
Sidaa awgeed waxa kula gudboon inaad u tagtid iyada waqtiyada dhexdooda ood la joogtid muddo ood ku noqotid shaqadaada, seddexdii biloodba ama afartii biloodba ugu badnaana lixdii biloodba dabeetana aad ku noqoto shaqadaada. Ujeedadu waa inaad reerkaaga kolba u tagtid, waxa haboon in mudadu (aad ka maqan tahay) gaabnaato (yaraato), waayo arinku waa halis, sharkuna waa badan yahay, fitanka xilligana waa noocyo kala duwan. Sidaas awgeed waxa ninka (zawjka) la gudboon inuu u daymo lahaado arimahan, kuna dadaalo badbaadada sharaftiisa iyo sharafta reerkiisa, kana fogaado sababaha keena fitnada.
Kuwa uu u shaqeeyana waxa la gudboon inay u ogolaadaan kuna kaalmeeyaan khayrka, waayo arimahani waa wax weyn oo ay waajib tahay in dhexdooda laysku kaalmaysto samaha iyo taqwada, oo shaqaalaha iyo ciduu u shaqeeyaana isku caawiyaan xaqa.
Majmuuc Fataawaa: 20/420-421.